Ebekwe kwi-umzantsintshona yinxalenye-United States, Enew Mexico ngu kwimo kunye kunye indigenous imicimbi yayo ngokunjalo ujonge phambili kuqoqosho. Ngaphandle ukusuka ezininzi elinolwazi kwaye ishishini amathuba, Enew Mexico kanjalo inikezela ubutyebi ka-yenkcubeko kwaye zembali indyebo leyo yenza oku Ilizwe Enchantment omnye foremost nemigaqo yokusebenzisa imichiza kuba romanticcomment adventures. Kuhlangana Ombane Barons Omnye ibaluleke kakhulu macandelo ka-Enew Mexico ke uqoqosho ufumana amandla. Oku ngenxa yokuba ilizwe urhulumente ngu otyebileyo kwi ilitye lamandulo ipetroli amafutha kwaye enye amandla zokusebenza. I-Firefox Juan Basin Igesi Indawo kukuba oyena intsimi ka-kwacacisa igesi yendalo ugcine e-United States Enew Mexico kanjalo iqulathe enkulu amalahle efakwa ebhankini kwi-umntlantshona yembombo Yombuso. Isithoba ngokwamashumi ka-umbane imveliso Kwisteyti evela amalahle-abalawuli izityalo.
uba geothermal amandla enokwenzeka, kwaye pockets Yombuso ingaba ezilungele kuba amandla omoya uphuhliso. Enew Mexico ke e-afrika deserts kunikela Urhulumente ke, uninzi concentrated ilanga amandla kwezo meko. Ngoko ke, ukuba ufuna ukuya kuhlangana richest abantu kule imeko, jonga ngaphandle kuba oli barons, wealthy evula indibano ebizwa kwaye inkampani executives ka-ombane iinkampani kwi-convention centers, ishishini okanye iinkomfa luxury hotels ka-enkulu izixeko njenge Albuquerque kwaye Santa Fe. I kwi-downtown kwiindawo ngokunjalo central ishishini izithili ezi zixeko babophelelekile ukuba abe buzzing kunye ngempumelelo iingcali kwaye businessmen enxulumene ne-amandla kwicandelo lezolimo. Get ukwazi urhulumente guys Federal urhulumente bechitha kukuba eyona nto umqhubi Omtsha Mexico kuqoqosho.
Kwi-federal urhulumente wachitha dollazi
ngomhla we-Enew Mexico kuba wonke dollar ka-irhafu yengeniso ingeniso yesebe eqokelelweyo ukusuka urhulumente. Oku bezinga kubuyela ngu ngaphezulu kunayo nayiphina imeko kwi-Union. I-federal urhulumente kwakhona enkulu umqeshi kwi-Enew Mexico ekuboneleleni ngaphezu a zekota urhulumente ke imisebenzi. Kwaye ngeli guys ukusebenzela urhulumente akavumelekanga ukuba azise ekhaya uhlobo inflated paychecks ukuba corporate honchos ntoni, abo kubo besebenza oluphezulu rungs rhoqo ukukelela eziliqela perks kwaye iinyhweba ukuba ngaphezulu kwama-yenza phezulu kuba i-abangaphantsi inani zeros kwi-ngenyanga paycheck. Ngoko ke, ukuba usebenzisa bemangalisiwe apho kuhlangana ezi guys, ezimbalwa izimvo izakuba ukuphonononga izixeko njenge Santa Fe Khawunti ekhaya Enew Mexico Komkhosi Wesizwe Balinde Headquarters ngokunjalo Rio Rancho kwi-Sandoval khawunti apho Yesizwe Balinde Armory ukhoyo. Ngaphandle kwi-National Lokugada, Enew Mexico ubani Enew Mexico Urhulumente nkqo ekukhuseleni ilungelo Umkhosi. Ezinye federal installations ziquka wesizwe observatories kwaye iteknoloji labs Los Alamos Wesizwe Laboratory (LANL) kwaye Sandia Wesizwe Laboratories (SNL). SNL siqhuba zombane kwaye mveliso uphando kwi Ekirtland AFB, kwi umzantsimpuma icala Albuquerque. Ezi installations kanjalo ziquka missile kwaye spacecraft proving emidlalo e-Mhlophe Sands. Ezinye federal nee-arhente ezifana National Park Inkonzo, i-United States Ihlathi Inkonzo, ne-United States Bureau Umhlaba Ulawulo ingaba ingozi enkulu yinxalenye imo ke lwasemaphandleni imisebenzi base. TIP: Millionaire Thelekisa sele ezininzi omnye millionaire abantu esuka Enew Mexico ikhangela abafazi ukuba umhla kwaye enye. Abantu ngendlela Efanayo Ngaphandle ukusuka anamandla federal abasebenzi, Enew Mexico nani kanjalo kuma eliphezulu ithuba lokwenza i-acquaintance ka-amagosa kwi-military, ingakumbi Zezulu Umkhosi. Urhulumente abaququzeleli ezintathu zezulu umkhosi bases (Ekirtland Zezulu Umkhosi Isiseko, Holloman Zezulu Umkhosi Isiseko, kwaye Cannon Zezulu Umkhosi Isiseko) ukuvavanywa lomqolo (White Sands Missile Lomqolo) umkhosi proving emhlabeni kwaye maneuver lomqolo (Fort Bliss – McGregor Lomqolo). Kwaye nkqu nangona military paycheck alinakukhuselwa comparable kunye okkt kwi-corporate ubomi, ukuzonwabisa perks kwaye glamour ye-efanayo ibe ngokulinganayo olomeleleyo amanqaku ka-utsalekoname. Ngoko ke, yenza oko a ukugcina yakho loluntu ikhalenda free kuba amagosa’ imisebenzi kunye namaqonga iziganeko ukuba zibe lonwabisa ahluka-Enew Mexico Zezulu Umkhosi stations amaxesha ngamaxesha kwaye ukuba ufuna lucky, mhlawumbi kuba eziliqela handsome amagosa ukuba izakunika inkampani
← I-american ividiyo incoko